Zvamunoona pakutanga zvinoratidza izvo zvauri kutsvaga muupenyu - HEALTH PLUS MAG - TELES RELAY
HOME » MAZANO Zvamunoona pakutanga zvinoratidza izvo zvauri kutsvaga muupenyu - HEALTH PLUS MAG
kugashira / kwete yavose sezvavakatarirwa /
Zvamunoona pakutanga zvinoratidza izvo zvauri kutsvaga muupenyu
Ndi: Jeremy R
Meso edu anoona zvinhu zvinotungamirirwa nepfungwa dzedu nemafungiro edu. Chimiro chakakosha chehupfungwa dzedu uye unhu hwedu hunokurudzira zvatinotarisa. Zvinhu zvatinoona zvinotaura zvakawanda pamusoro pehupenyu hwedu uye zvimwe zvakavanzika zvemwoyo yedu. Heano muedzo unozokuudza zvauri kutarisa muupenyu kubva pane zvaunoona kutanga.
Maererano neHermann Rorschach, chiremba chepfungwa uye muumbi wekuzivikanwa kwakajairika nematanda eminki anozivikanwa seRorschach test, zvinhu izvo munhu anoona mumufananidzo zvinotsanangurwa nemunhu uye unhu hwake. of mifananidzo Abstract inogona kuratidza zviri kuitika mupfungwa dzevanhu uye kuratidza zvimwe humwe hwakavanzika hwehupenyu hwavo.
Chiyero chatinopa munyaya ino chinokubvumira kudzidza zvinhu zvitsva uye zvinofadza pamusoro pako. Zvose zvaunofanira kuita ndezvekutarisa pamufananidzo uye utaure zvawaona pakutanga.
Nokutarisa pamufananidzo uyu nekuzoongorora mhinduro, unogona kuziva zvauri kutsvaga muupenyu.
Onai chien kutanga zvinoreva kuti iwe unogara uchitsvaga zvakaoma. Iyo imbwa chiratidzo chekuvimbika, rugare uye kugadzikana. Kuzviziva pakutanga kunoreva kuti uri kutsvaga unhu uhwu kune mumwe wako. Iwe uri murugare newe pachako mushure mekuwana hupenyu uye ikozvino iwe unoziva zvaunoda muupenyu: mumwe munhu kugovana nayo.
Unokoshesa ruremekedzo uye unoziva kupa vamwe nzvimbo. Iwe chete unoda shamwari yakasimba uye yakasimba iyo ichakuremekedza uye ichagoverana newe nemufaro weupenyu. Mudiwa akakodzera vimba uyo anogovera maonero ake newe nokutendeseka, kunyange kana zvisizvo nguva dzose zvaunoda kunzwa.
Izvo zvaunoda kuchengeta mupfungwa ndezvokuti haufaniri kumhanyira muupenyu hwako sarudzo. Munzira iyo wawana mukati mako mufaro, iwe unofanirawo kugutsikana newe. Bvumira nguva yekuporesa marwadzo ose aunonzwa uye kana wabudiswa kubva mukati, uchakwanisa kuwana shamwari yakarurama yauri kutsvaga.
Vanhu vanoona mbwa yekutanga vanotarisawo kutendeseka muupenyu, shamwari ine rugare inogara navo panguva yakanaka uye yakaipa uye inovada chaizvo.
Kana wakamboona chiso pakutanga, zvinoreva kuti iwe unogara uchitarisa hupenyu hwako nekunongedzera. Iwe wakatsunga zvinangwa zvako, kurota kwako, uye iwe unoziva kuti ungavawana sei. Iwe zvichida uri kutotanga kuzviita. Iwe wakagara uchitarisa pakupedzisira kwake uye hapana chimwe chinhu chinogona kukukanganisa iwe. Ndicho chikonzero, mukati mukati mako, uri kutsvaga kugadzirwa uye izwi romukati rinokuudza zvaunoda muupenyu, chimwe chinhu chisingaenzaniswi nemari kana zvinhu zvekunyama. Mhinduro yacho inogona kuva rudo.
Imba yakawanda yemhuri yako, motokari yakanaka uye kudzokera kwakanyarara zvinhu zvose zvinofadza. Zvisinei, paunoshandisa rutivi rwako rwekusika, unoziva kuti muzvokwadi, zvinhu izvi zvinomirira zvido zvekutanga muupenyu.
Unofanirwa kutora nguva yekufungisisa, kuve wakanyarara, uye rega pfungwa dzako dzizarurire manzwiro matsva, mikana, uye manzwiro. Zvaunotarisira zvakadzama zvinowanzoenderana nerudo pane zvinhu zvenyama.